Pindura: Shandura Yako Ekutengesa Engagement Iine LinkedIn Email Kutsvaga uye Kuparadzira | Martech Zone
China, November 5, 2020 China, November 5, 2020 Douglas Karr
Hapana aigona kupokana nazvo LinkedIn ndiyo yakazara kwazvo bhizinesi-yakavakirwa pasocial network chikuva papasi. Muchokwadi, ini handina kutarisa kune yakasungirirwa resume yemumiriri kana kuvandudza yangu ndega kutangazve mumakore gumi kubvira ndichishandisa LinkedIn. LinkedIn haingonditenderi kuti ndione zvese zvinoitwazve, asi ini ndinogona zvakare kutsvagurudza network yemumiriri uye ndione wavakashanda naye uye naani - ipapo bata vanhu avo kuti uwane zvimwe.
Ehezve, haingori sosi yevanotsvaga basa kana makondirakiti… iri zvakare dhatabhesi rakazara kwazvo pasi pano revashandi vezvicherwa netarisiro futi, kunyanya kana uri kutumira Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira sarudzo.
Pindura Sales Engagement
pindura is a multichannel kutengesa kubatanidzwa chikuva iyo inogadzira yega email kufambiswa, mafoni, uye mabasa, nepo Kutengesa kunogona kutarisa pane izvo zvinonyanya kukosha - kuvhara madhiri. Heino yakakura yekutarisa vhidhiyo:
Pindura Zvimiro Sanganisira
pindura inoita kuti iwe uwane matarisiro emhando yepamusoro kune ako LinkedIn ekushambadzira mishandirapamwe kubva kuSalesforce, Hubspot, Mhangura CRM, pamwe nemazana evanopa dhata kuburikidza nekubatanidzwa kwemuno uye yechitatu-bato masevhisi.
LinkedIn Chrome Kuwedzeredzwa - Tsvaga tarisiro 'emabhizimusi maemail paLinkedIn uye ramp kukwirisa kwako kugadzirwa nePindura Chrome Kuwedzeredzwa. Mabasa ako ezuva nezuva uye kugona kubatanidza kuburikidza neLinkedIn, maemail uye izwi zvinogara zvichisvika.
Multichannel Kutengesa Kuenzanisa - Shingairira netarisiro yako kuburikidza nenzira dzakawanda - tumira maemail ako nekutevera, kufona, kuzadzisa mabasa ezuva nezuva, batanidza uye svikira kune ako tarisiro otomatiki paLinkedIn.
Kutengesa Kugadzira - Ramp up yako yekugadzira nemabasa ezuva nezuva uye kugona kubatanidza kuburikidza neLinkedIn, email, izwi, uye zvemagariro. Log chiitiko, uye natively batanidza kune yako CRM, Zapier, kana kuburikidza neAPI kusangana.
Kutengesa Kutaurirana Management - Gadzirisa vanotarisira vatengi zviri nyore - chidimbu chako tarisiro zvichienderana nemakumi ezviuru zveyambiro yekuchengetedza kusvika kwako kwakarongeka. Imba kana wedzera vokukurukura, chidimbu chevanofambidzana, firita vokukurukura, wongorora yavo yakateedzana nhoroondo uye chiitiko, pamwe nekutema mazita kumatunhu uye vanobatika.
Kutengesa Cloud Kudana - Unganidza netarisiro yako pafoni chaipo kubva paPinduro account uye Chrome yekuwedzera. Zadzisa izwi mune rako rekutengesa kutaurirana neCloud Mafoni.
Smart Kutengesa Zvimiro - Revenue Reply's AI-yakadzoserwa maficha kuti uite netariro yako zvirinani uye nekukurumidza - kusanganisira inbox email kupatsanura, mhando cheki, uye mazano, zviito zvakakurudzirwa uye zvakakurudzira kufona kweanopisa tarisiro.
Kutengesa Chikwata Chidimbu - Shandira pamwe pamishandirapamwe uye tarisiro, maneja nhengo dzechikwata, govana email uye mushandirapamwe matemplate, kuteedzera timu kuita uye nezvimwe nePindurudza Chikwata Chidimbu.
Sales Reports uye Analytics - Teedzera yako kuteedzana kufambira mberi uye woongorora yako timu mhedzisiro neReply's yakazara kuzivisa nezve kuteedzana, timu mhedzisiro, kufona kurekodha, uye kufona uchiteerera pamwe nekutengesa kugona.
Pindura Improvement Zvishandiso - Rongedza mameseji ako kuti usvike pakakwirira kuita - Pindura ine seti yematurusi ekuvandudza kuti ikubatsire kuwana mibairo iri nani, kusanganisira mhando yeemail, kuyedzwa kweA / B, akateedzana matemplate, uye mabhokisi ekutumira kunze.
Tora Demo Rokupindura
Kuzivisa: Tiri kushandisa pindura affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: daidzira kusvikaclearbitcontactcloudmhangura crmdanyanyzeemail tsvagaemail kusimbiswaYakazaraContacthubspotLinkedInlinkedin kusvikamadkudukushambadzira kunzekutengesa kwakabudaowlerpindurasales contact manejimendikutengesa kubatanidzwakutengesa kubatanidzwa chikuvakutengesa kusvikakutengesa kushumasalesforcezapierzoominfo